Fandosiran’ny gadra tao Antanimora Tara indray ny fampandrenesana ny zandary
Mpiambina nanafika Banky 60 tapitrisa ariary no tafavoaka tao amin’ny “GAB”
Ny hiaro ny orinasa no nanakaramana ireo mpiambina tsy miankina nataon’ity banky iray vao nifindra tsy ela tao amin’ny foibeny vaovao amin’ny Bd Joffre.
Fanafihana mpiasan’ny banky Jiolahy 2 matin’ny UIR teny Ankorahotra
Lehilahy roa no voatifitry ny polisy tetsy Ankorahotra –Ambanidina manakaiky ny Foibe Taon-tsaritany Malagasy (FTM) omaly vao maraim-be.
Mahajanga Voatafika ny Microcred , lasa ny vola 2 kitapo
Nisy namaky omaly tokony tamin’ ny 7 ora latsaka fahefany hariva ny banky fampindramam-bola madinika na ny Microcred ao Mahabibo Mahajanga. Fiara tsy mataho-dalana marika Nissan miloko volon-davenona na « Gris » miafara amin'ny ...
Vono olona sy halatra taova etsy sy eroa Fanakorontanana saim-bahoaka ?
Nalaza tato ho ato tany amin’iny tapany atsimon’ny nosy iny ny raharaha vono olona miharo halatra taova. Olona 6 no voalaza fa nisy namono tao Toliara ary tsy hita ny masony ny faran’ny herinandro teo.
Antsirabe, Mandoto Nitrangana fatiolona mahatsiravina
Nitrangana hain-trano tsy nampoizina indray tao amin’ny fokontany Tsarasaotra-Antsirabe ny marainan’ny talata 27 febroary 2018 teo. Lehilahy iray efa 76 taona, taizan’aretina ka nalemy tao am-pandriana efa an-taonany no may kila forehitra.
Dahalo 2 voasambotra tany Antsiranana Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Nandriaka indray ny ra vokatry ny fitsaram-bahoaka tany amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Sadjoavato, any Antsiranana omaly alatsinainy 26 febroary.
Mpitsara sy mpiandry fonja Fitsarana mikatso, gadra tafaporitsaka…
Voakiana mafy ny resaka fitsarana sy ny mpandraharaha ny fonja mikasika ny resaka fitazonana am-ponja vonjimaika amin’izao fotoana izao.
Kisendrasendra teny an-dalam-be no nahazoan’ny zandary vaovao fa nisy gadra nitsoaka tao amin'ny fonjan'Antanimora ny alin'ny 10 hifoha 11 febroary 2018, ka nanamarinana izany teny an-toerana. Nandefa iraka mba ahafahana mandray ny fepetra izy na dia efa somary tara ihany aza izany, hoy ny fanambarana omaly.
Omaly 11 febroary 2018 tokony ho tamin’ny 11 ora atoandro, rehefa nanantona ny tompon'andraikitra tao amin'io fonja io ny lefitry ny komandin'ny borigady Betongolo, dia nilaza izy fa nisy tokoa ireo gadra nandositra, saingy tsy mbola afaka nanome ny mombamomba ireo gadra izy ireo satria mbola mivory momba izany, fa homena ihany ny mpitandro ny filaminana rehefa vita. Tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro, dia naterin'ny iraka avy any amin'ny fonja teny amin'ny zandarimaria ny mombamomba ireo gadra. Raha ny tokony ho izy dia vao mahafantatra ny fandosirana ny tompon'andraikitra eny amin'ny fonja dia efa milaza haingana amin'ireo tobin'ny Hery rehetra akaiky azy ny zava-mitranga sy ny mombamomba ny gadra nandositra mba ahafahana eo noho eo ihany manao ny fanenjehana sy fanakanana, hoy ny zandary. Manaraka ho azy aoriana ny fanaovana ny “avis de recherche”, izay "formalités" na fombamba an-taratasy fotsiny. Tamin’ny fandosiran’ny gadra 5 ny alin’ny 7 oktobra 2017, dia efa ny takarivan’ny ampitson’iny vao fantatry ny zandary izany. Nanome tsiny mpiandry fonja izy ireo noho izay fomba fiasa sy ankinafinafina izay, saingy miverina indray izany. Misy isaky ny alina ny fisafoana ataon'ireo mpitandro ny filaminana ankoatra ireo "piquet" izay fiandry afaka manampy raha ilaina indrindra moa amin'ny trangana "évasion" toa izao, hoy ny zandary.